WTM: ny fihaonamben'ny minisitra dia naheno ny fomba hanampian'ny teknolojia maoderina ny fomban-drazana ambanivohitra
Home » Vaovao momba ny indostria fihaonana » WTM: ny fihaonamben'ny minisitra dia naheno ny fomba hanampian'ny teknolojia maoderina ny fomban-drazana ambanivohitra
Fihaonana an-tampon'ny minisitra WTM
Marika lehibe manerantany toa ny Google ary Mastercard afaka manampy ny tantsaha, ny mpivarotra ary ny restaurateurs hanatsara ny fizahan-tany any ambanivohitra, naheno ny solontena androany tao amin'ny World Travel Market (WTM) London - ilay hetsika nahatongavan-kevitra.
Mpandraharaha sy mpitarika orinasa ao amin'ny Fihaonana an-tampon'ny minisitra UNWTO & WTM nanentana ihany koa ireo minisitry ny fizahantany manerantany mba hiara-hiasa amin'ny orinasa hanampy ireo vondrom-piarahamonina ambanivohitra.
Ny lohahevitry ny fihaonana an-tampony isan-taona dia ny 'Teknolojia ho an'ny fampandrosoana any ambanivohitra', ary natao hametrahana ny asa ho an'ny asa bebe kokoa amin'ny taona 2020, raha ny "Fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra sy ny fizahan-tany" no lohahevitra ho Andro fizahan-tany eran-tany 2020 amin'ny 27 septambra.
Diana Muñoz-Mendez, Senior VP, Fiaraha-miasa amin'ny fizahan-tany manerantany ao amin'ny Mastercard, dia nilaza fa ny orinasan-karama dia manampy ireo orinasa kely any ambanivohitra - toeram-pambolena, fivarotana ary trano fisakafoanana - handray vola nomerika fa tsy hampiasa vola, satria mandoa karatra ny ankamaroan'ny mpandeha.
Ann Don Bosco, Head of Grow ao amin'ny Google, dia nilaza fa ny teknolojia goavambe dia nanofana olona 120,000 XNUMX tany amin'ny hotely Greek ambanivohitra mba hampiasa ny teknolojia betsaka indrindra ary mikasa ny hanitatra ny fandraisana andraikitra any Japon sy Kenya.
Tetikasa iray hafa ho an'ny tantsaha - amin'ity indray mandeha ity any Torkia - dia nasongadin'i Debbie Hindle, Tale mpitantana ao amin'ny Fitsangatsanganana efatra, izay nilaza hoe: "Ny fizahan-tany any ambanivohitra dia tsy ny mpizahatany ihany - ny hetsika Taste of Fethiye avy amin'ny Travel Foundation dia namporisika ny tantsaha hamokatra sakafo ho an'ny hotely ao an-toerana, ary hilaza izany momba ny mpizahatany.
Tranga iray hafa natolotry ny Santiago Camps, Lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny Mabrian Technologies - izay manampahaizana manokana amin'ny famakafakana data momba ny dia.
Nilaza izy fa ny tambajotran'ireo tanàna misy lova any ambanivohitr'i Kolombia dia nanampy tamin'ny fanatsarana ny traikefa ho an'ny mpandeha ary nanaparitaka ny vola miditra amin'ny fizahan-tany mihoatra ny toerana manintona sy tanàna mahazatra. Gary Stewart, Talen'ny fihaterana haingana Wayra UK, ireo tanjona kendrena toa an'i Suède sy Israel ho ohatra tsara amin'ny toerana izay manintona ny mpampiasa vola.
Ahmad al-Khatib, filohan'ny Kaomisiona Saodiana misahana ny fizahan-tany sy ny vakoka nasionaly, nilaza tamin'ny fihaonana an-tampony fa manana tanjona kendrena hampandroso ny fizahan-tany i Arabia Saodita - saingy te hitahiry ny lova sy ny fomban-drazana any ambanivohitra tsy manam-paharoa izy.
"Ohatra, ny Airbnb mpampiantrano dia afaka manolotra fiarahabana any ambanivohitra izay mbola tsy misy trano fandraisam-bahiny," hoy izy tamin'ny minisitra.
“Azonao atao ny mijanona ao amin'ny fianakaviana iray ary mahita ny fomba fihinany sy ny fitafiany.”
Niorina ho fivoriana lehibe indrindra isan-taona an'ny minisitry ny fizahantany, ny tobim-pieritreretana avo lenta dia nohanin'i Nina Dos Santos, Tonian-dahatsoratra any Eropa ao amin'ny CNN International.
Nanasa ireo minisitry ny fizahantany avy any Yemen, Guatemala, Panama, Albania, Bolivia, Colombia, Sierra Leone ary Portugal izy hiresaka momba ny maha-zava-dehibe ny fampandrosoana any ambanivohitra mba hanohanana ny fizahantany sy ny toekarem-pirenena.
Ny ohatra amin'ny fampiharana tsara dia miainga amin'ny teknolojia finday any Sierra Leone, hatramin'ny fandrisihana hetra ho an'ny trano fandraisam-bahiny Kolombiana, fandraisana andraikitra Wi-Fi any Portugal, fary sy vokatra kakao any Goatemalà, ary satroka hosodoko any Panama.
eTN dia mpiara-miasa amin'ny haino aman-jery WTM London.
WTM: Exhibitors any London 2019 dia mampiseho izay rehetra tsy manam-paharoa amin'ny toerana alehany
Ny Brand USA dia be fanakianana noho ny hatramin'izay satria nitohy ny fitetezana iraisam-pirenena